Ezigbo Obi Obi: William Wallace na Stirling, Scotland | Akụkọ Njem
Ezigbo Obi Obi: William Wallace na Stirling, Scotland
Maria José Roldan | | omenala, Ido Scotland
Aga njem na Scotland ga-atọ ụtọ nke ukwuu. E nwere otu obodo ị nwere ike ịga njem nke ị na-agaghị akwa ụta, m na-ekwu maka obodo Stirling, nke dị ihe na-erughị 1 awa site na ụgbọ oloko si Edinburgh.
Na-emegharị Ọ bụ obodo ndị mara mma nke Scottish, nke na-akpọghachite gị ozugbo n'oge ọgụ n'etiti ndị Scots na "kilts" ha (skirts) na ndị Bekee.
Ihe ngosi ileta bụ nnukwu ụlọ, ụlọ mkpọrọ ochie na n'ezie nnukwu nnukwu ihe ncheta nke emere na ebe nchekwa nke Onye mgbasa ozi Scottish William Wallace; onye onye obula maara ya Nwere Obi Ike Obi nkirina Mel Gibson nke protagonist. Ọ bụrụ na ị hụla ihe nkiri a, ị ga-amata otu ọ siri masị gị, ị ga-ahụkwa n'anya ịtụgharị ya na ọbụlagodi na ị nọ n'ime ihe nkiri ahụ.
1 Ememe Ncheta National Wallace
2 N'elu ala dị iche iche nke ụlọ elu ahụ
3 William Wallace, eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo?
Ememe Ncheta National Wallace
El Ememe Ncheta National WallaceEmeghe ya na 1869, ọ bụ nnukwu ụlọ elu dị 67 mita, nke site na ala ya dị iche iche, ha na-akọwa ndụ na agha nke Wallace maka nnwere onwe nke Scotland. Chegodi otu o gha adighi nma. O doro anya, ọ bụghị na ị chere ya, ọ bụ na ị gara leta ya ma jiri anya gị hụ ya!
Lọ elu ahụ dị n’elu ugwu, nke ịnwere ike iji obere bọs na-akwụghị ụgwọ, nke na-akpọrọ ndị mmadụ n’otu dị ihe dị ka mmadụ iri abụọ. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọ bụ njem nke naanị 20 nkeji. Mgbe ị na-eche na ị nwere ike ịnụ ụtọ obere ụlọ ahịa ihe ncheta na n'ezie, echefula iwere foto a na-ahụkarị nke ihe oyiyi Mel Gibson, nke akpọrọ Wallace na Obi Obi.
N'elu ala dị iche iche nke ụlọ elu ahụ
na mbụ ị ga-ahụ mma agha Wallace, nke site n'ụzọ, bụ nnukwu, ebe ọ bụ na ha na-ekwu na Wallace bụ nwoke toro ogologo. Site na ogwe osisi na vidiyo nwere ezigbo agwa, ha na-agwa gị akụkọ nke onye nọchiri Wallace, Robert de Bruce. Na agha nke edemede, Wallace, n’ibu ndị ikom 16.000 meriri usuu ndị agha nke ndị agha 50.000 nke Eze Edward nke Mbụ, nnukwu mmeri a Wallace mere ka ọ bụrụ dike ma jee ozi iji nweta nkwado nke ndị a ma ama na ịbụ onye nlekọta nke Scotland. N'ezie, na dị ka anyị maraworị, a raara Wallace nye ma gbuo ya n'ụzọ ọ ka mma ịghara icheta, ị na-ahụ ihe nkiri ahụ.
na nke abụọ, bụ ụlọ a na-akpọ ụlọ nke ndị dike nke Scotland, gbasara ndị mmadụ ama ama n’agha ha ma ọ bụ n’ihi ihe ha mepụtara ma ọ bụ ihe ndị ha chọpụtara.
na nke atọ, a kọọrọ akụkọ banyere iwu ihe ncheta ahụ, nke bụ ihe esemokwu, ebe ọ bụ na ha ekwenyeghị ebe a ga-ewu ya.
Na njedebe, ị ga-eru ụlọ, ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ ikpọ echiche site na ọmarịcha obodo Stirling, nnukwu ụlọ ya na Osimiri Naịl na-emepụta ya. Isi ihe maka ezigbo foto.
Ah, eziokwu dị mkpa, ihe ncheta nke Wallace bụ nke kachasị ọnụ, ihe dị ka euro 8; ya mere, ọ ga-adaba adaba na ị ga-ebido nleta na nnukwu ụlọ, ebe ọ bụ na ọnụ ụzọ ụlọ ahụ ha nyere gị a Nbudata 20% maka ntinye aka na Ncheta Wallace. Yabụ ichekwa obere ego iji zụta ihe ncheta.
William Wallace, eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo?
Enwere ndị na-eche na William Wallace bụ naanị akụkọ ifo n'ihi na a chọpụtaghị ọtụtụ ndekọ iji kwado akụkọ ya niile. Amabeghị ama ma ọ bụ onye ama ama ma ọ bụ bụrụ onye eze.
Enwere otutu ịkọ nkọ banyere oge na ebe a mụrụ gị, ndị mụrụ gị, ma ọ bụ na ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye. Ewere ụbọchị ọmụmụ ya ka ọ bụrụ 1.272 mana onweghị ezigbo ihe akaebe ga-akwado ụbọchị a.. N'ezie enwere ụbọchị dị n'etiti 1.260 na 1.278. Ekwuru na nna ya bụ Sir Malcolm Wallace nke elderlie na Paisley na ọ bụ onye sitere na Richard Wallace ma ọ bụ "le Waleis" onye Wales. Mana amabeghị n’ezie onye nna ya bụ n’ezie. Enwere obi abụọ n’etiti nwoke ahụ akpọtụrụ na Alan Wallace.
E kwuru na ha bịara Scotland ije ozi n'ụlọ Eze David nke Mbụ na mbido narị afọ nke iri na abụọ. Ihe a maara bụ na o nwere ụmụnne abụọ: Malcolm na John, amaghịkwa ma ọ lụrụ nwanyị ma ọ bụ na ọ lụrụ ma ọ nwere ụmụ. Ogbugbu nke Sheriff nke Lanark na 1297 na-eche na ọ ga-abọrọ maka ogbugbu nke igbu nwunye ya, Marion Braidfute.
E kwuru na Wallace dị ike, onye bu mmadu puru iche, ujo ma nwee ike imeghari ma muta ngwa ngwa.
Ha kowara ya dika nwoke toro ogologo nke nwe aru di uku ma nwekwaa obi uto nke nwere ihe di nma, ubu sara mbara na okpukpu uku. Na a anụ ọhịa anya, obosara hips na ogwe aka ya na ụkwụ siri ike ma sie ike. Ọ bụ ezie na ndị a bụ naanị echiche n'ihi na a maghị kpọmkwem ihe ọ dị ka ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ eserese n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ ya. Ma ihe osise ndị dị adị na-egosi nwoke kpebisiri ike na-etinye okpu agha, nke a na-eche na ọ na-ezo aka na mmalite nke ezinụlọ Wallace na Wales.
Ọ bụ ezie na ihe nkiri Braveheart gbadoro ụkwụ n’akụkọ ihe mere eme a maara nke William Wallace na ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ akụkọ na-ezighi ezi akụkọ ihe mere eme na fim ahụ, ọ gaghị enwe ike ịme ihe nkiri dabere na eziokwu niile n’ihi na enweghị nkwekọrịta n’ozuzu eziokwu., dị nnọọ ole na ole nkọwa. Ihe doro anya bụ na ihe nketa ya na-adịgide na akụkọ ya dị na ndụ ọtụtụ mmadụ. n'ihi nke a kwa, ruo taa ọtụtụ ndị njem nleta na-aga n'ihu ileta William Wallace na Stirling.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere agwa a ma hụ ụlọ elu ahụ, ala ndị ahụ na ihe ọ bụla metụtara agwa a, mgbe ahụ ị gaghị enwe ohere ịhazi njem gị ọzọ na Scotland, n'ihi na n'ezie ị gaghị akwa ụta. Ndi nkiri nke Mel Gibson nwere obi ike Obi masịrị gị? Ọbụna karịa ị ga-achọ ịchọpụta eziokwu niile!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Ezigbo Obi Obi: William Wallace na Stirling, Scotland
ndewo, anụrụ m banyere ihe akpụrụ akpụ a, achọpụtara m na ọ bụ eziokwu. Ọ ga-amasị m ka ị kọwaara m otu esi aga Scotland, yana aro. Biko zitere m email na email nke m nyere. Daalụ.
Utezọ iji chọpụta Rouen, obodo nke otu narị mgbịrịgba elu